JancsiTech Sequoia တရုတ် နှင့်အတူ ငွေကြေး အပေးအယူ ပြီးစီး – Pandaily
Jan 13, 2022, 19:36ညနေ 2022/01/13 23:20:30 Pandaily
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူJancsiTech က လတ်တလော ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး ကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့သည်ဤ အလှည့် ကို Sequoia China Seed Fund မှ ဦး ဆောင်သည်။
JancsiTech ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တည်ထောင်သူ အဖွဲ့သည် အကြီးတန်း နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူ များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တည်ထောင်သူ Zhou Haotian သည် Alibaba Damo Institute နှင့် Ant Group တွင် ယခင်က အလုပ်လုပ် ခဲ့ဖူး သော်လည်း GNS Healthcare တွင် Artificial Intelligence ၏အကြီး တန်း အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် လုပ်ကိုင် ခဲ့ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ပလက်ဖောင်း တစ်ခုတည်ဆောက် ရန်တာ ဝန် ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ CTO Zhou Guanqun သည်တရုတ် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ တရုတ် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ်၊ စ တန်း ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် နှင့် SLAC National Accelerator Laboratory တို့တွင် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်း များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တည်ထောင်သူ အဖွဲ့တွင် လူသိများသော အတု ထောက်လှမ်းရေး အသိုင်းအဝိုင်း AICUG ကိုတည်ထောင် သူနှင့် Philips မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ ကျွမ်းကျင်သူ များပါဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် ပုံရိပ် စွမ်းရည် ရှိသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ များအတွက် သိ မှုဆိုင်ရာ အာရုံ ဆိုင်ရာ algorithm ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုပေးသည်။ ဤ ၀ န် ဆော င်မှုသည် ကုမ္ပဏီ များအား စက်ပစ္စည်း မှ အချက်အလက် များသို့မဟုတ် အချက်ပြမှု များကိုစုဆောင်း ပြီး ထို အချက်အလက်များကို အမြင်အာရုံ ပုံရိပ် နှင့် ပုံရိပ် အသိအမှတ်ပြု ခြင်းဆိုင်ရာ algorithms များနှင့်ပေါင်းစပ် နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင် မှုများတွင် ပစ်မှတ် များသို့မဟုတ် ပစ်မှတ် ထားသော အဖြစ်အပျက် များကိုဖော်ထုတ် ခြင်းနှင့် ခြေရာခံ ခြင်း၊ ပုံရိပ် ခွဲ ခြင်း၊ ပုံရိပ် ပေါင်းစပ် ခြင်းနှင့် 3D ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း တို့ပါ ၀ င်သည်။
တည်ထောင် သူများက သူတို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ရိုးရာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ များအတွက် တိကျသော တည် နေရာနှင့် လမ်းညွှန် စနစ်များ ကိုထောက်ပံ့ပေး ရုံသာမက လူနာများအတွက် radiotherapy ဆေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူနာ နေရာချထား မှု ထိန်းချုပ် ခြင်းစသည့် ဘက်ပေါင်းစုံ ကုသမှု များကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန် စေ မည်ဟုမျှော်လင့် ကြသည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၎င်းကို ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော ဓါတ်ရောင်ခြည် ပမာဏ စောင့်ကြည့် ခြင်းနှင့် 3D ပုံရိပ် ကိရိယာ များနှင့် တွဲဖက်၍ ပြုလုပ် ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ကုသမှု အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကဲဖြတ် ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှု အစီအစဉ် များအတွက် အသိဉာဏ်ရှိသော အကြံဥာဏ် များ ပေးရန် ၎င်း အချက်အလက်များ ကို၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ဒေတာဘေ့စ် နှင့် ပြန်လည် ကိုးကား ထားသည်။
စီမံကိန်း ၏အမှန်တကယ် လည်ပတ် မှုအပေါ် မူတည်၍ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း ၏လက်တွေ့ စမ်းသပ် မှုများနှင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုကိုတိုးမြှင့် နိုင်ရန်အတွက် ရှန်ကျန်း ရှိ စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် သူနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ် အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ဆေးရုံ များရှိ ပစ္စည်းကိရိယာများ ရောင်းချ ရန် အခြား မိတ်ဖက် ပစ္စည်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူများ နှင့်လည်း မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ SaaS ပလက်ဖောင်း LinkedCare သည် D + ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး သည်
လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး အရှိန်မြှင့် စက် ၃၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ယူနစ် ၃၀၀ နှုန်းဖြင့် တိုးတက် နေသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး အတွက် ပြည်တွင်း စျေးကွက် သည်ယွမ် ၁၀ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၅၇ ဘီလီယံ) ခန့်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက် များမှာ visionRT, C-Rad နှင့် BrainLab တို့ဖြစ်သည်။
Tags financing | JancsiTech | Medical Supplies | sequoia capital china
JancsiTech ने सिकोइया चीन के साथ वित्तपोषण लेनदेन पूरा किया
चिकित्सा उपकरण निर्माता JancsiTech ने वित्तपोषण के नवीनतम दौर को पूरा करने की घोषणा की। इस दौर का नेतृत्व सिकोइया चाइना सीड फंड कर रहा है।
ਜੈਨਸੀਟੇਕ ਅਤੇ ਸੇਕੁਆਆ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਕਰ ਜੈਂਸੀਟੇਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ. ਸੇਕੁਆਆ ਚਾਈਨਾ ਬੀਜ ਫੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਦੌਰ.